Naya Drishti | उद्योगपति तथा राजनितिज्ञ राजेन्द्र वीर रायको कथा - Naya Drishti उद्योगपति तथा राजनितिज्ञ राजेन्द्र वीर रायको कथा - Naya Drishti
मुख्य समाचार नयाँ दृष्टि साहित्य
उद्योगपति तथा राजनितिज्ञ राजेन्द्र वीर रायको कथा
स्कुले जिवनमा हामी धेरैले ‘शिशिर र बसन्तको कथा’ पढेकै हौंला । ‘एकादेशमा एउटा राजा हुन्छन । राजा सिकार खेल्न जंगल गएका हुन्छन । रानी दरबारको खोपीमा बसेर बाहिरको वातावरण नियाली रहेकी हुन्छीन । नजिकैको झाडिमा एउटा चराको गुड हुन्छ । गुडमा चराका बचेरा हुन्छन । आमा चरी उनिहरुलाई विभिन्न खाना ल्याएर ख्वाउछिन । तर एकदिन कुनै सिकारीले हानेर आमा चरीलाई मारिदिन्छ ।
आमा चरीलाई सिकारीले मारेपछि बा चरोले अर्काे चरी ल्याउछ । सुरुसुरुमा त ति चरीले पनी बचेरालाई आहारा ख्वाउछिन । तर बिस्तारै उनले वास्ता गर्न छोड्छीन र एकदिन गुड बाट निकालेर फ्याक्दिन्छीन । त्यो देखेर रानी सोकमा पर्छिन । उनलाई लाग्छ – यदि म पनी कसैगरी मरीहाले भने मेरा छोराहरु शिशिर र बसन्तको हालत यस्तै त हुदैन ?
नभन्दै चिन्तै चिन्ताले रानीलाई चिताको बाटोमा पुर्याउछ । उनको मृत्यु हुन्छ । राजाले केहि समय पछि अर्की रानी ल्याउछन । ति रानीले केहि दिन त राम्रै गर्छिन तर दिनहरु वित्दै जाँदा उनिहरुलाई दरवारबाट निकाला गर्छिन ।
बयलडाँडा बाट शितलपाटी पुग्ने बाटोमा अहिले पनी घना जंगल छ । त्यहाँ ५५ बर्ष पहिले कति घना जंगल थियो होला ? त्यहि बाटो हिड्नु रायको दैनिकी थियो । राय भन्छन – ‘त्यहाँ माझिपौवा भन्ने खोल्सा थियो । त्यो अधेरो थियो । त्यहाँ मलाई असाध्यै डर लाग्थ्यो । त्यस ठाउँ क्रस गर्न कि त म ज्यान फालेर कुद्थे कि त कसैलाई प्रखेर वस्थे ।’
त्यसपछी २०४८ सालमा उनले काठ्माण्डौमा नै ‘रारा इम्प्लाईमेन्ट कम्पनी’ खोले । लगतै २०५२ सालमा उनले ललितपुर फाईनान्स कम्पनी र गुह्यश्वरी फाईनान्स कम्पनी पनि सञ्चालन गरे । त्यस्तै उनले सुप्रिम अटोमोबाइल, निगाल्चुला ट्रेडर्स र रारा कम्प्युटर इन्टरनेशनल जस्ता व्यबसाय संचालन गरे । २०५० सालमा नेपालगन्जमा उनले ‘राय फार्म’ सञ्चालनमा ल्याए तर त्यो फार्म द्व’न्दकालमा माओबादीले कब्जा गरेर पुर्नरुपमा ध्वस्त गरिदिए ।